WARBIXIN: Shanta Dhibaato Ee Haysata Manchester City, Qaybta Uu Ku Leeyahay Pep Guardiola Iyo Shaqsi Jacayl Door Weyn Ka Ciyaaraya - Gool24.Net
WARBIXIN: Shanta Dhibaato Ee Haysata Manchester City, Qaybta Uu Ku Leeyahay Pep Guardiola Iyo Shaqsi Jacayl Door Weyn Ka Ciyaaraya
December 9, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Sabtidii, waxay Manchester City u ahayd maalin murugo markii garoonkooda Etihad ay ku diiwaangashatay guul-darro xanuun badan oo uga timid kooxda ay cadaawadda weyni ka dhaxayso ee Manchester United oo ku jirta mid ka mid ah qaab-ciyaareedyadii ugu xumaa.
Laba goo loo ay ka dhaliyeen Marcus Rashford iyo Anthony Martial qaybtii hore, ayaa Ole Gunnar Solskjaer saarnaa ku wareejiyey Pep Guardiola oo rikoodhkiisii ugu xumaa intii uu tababaraha ahaa meel qortay maadaama uu 14 dhibcood ka hooseeyo Liverpool oo hoggaanka haysa.
Natiijadan, waxay Manchester City u sheegtay in aanay xili ciyaareedkan difaacan karaynin horyaalka ay labada sannadood ee isku-xiga ee hore kusoo guuleysteen, hase yeeshee markan uu Pep Guardiola iska qanci doono, laakiin waxa taas diiday tababaraha reer Spain oo ku dooday inay dagaallami doonaan illaa daqiiqadda ugu dambaysa.
Qaab-ciyaareedkan aan fiicnayn ee Man City, waxa la rumaysan yahay inay sababeen arrimo isbiirsaday oo taxan difaac illaa weerar, kuwaas oo Pep aanu dhayal kul xallin karaynin.
Saddexda ciyaarood ee soo socda, Manchester City waxay ku noqon doonaan imtixaan, iyagoo waajihi doona Arsenal oo ay Etihad ku martigelin doonaan, Leicester City oo ay ugu tegi doonaan King Power iyo Wolves ka hor inta aanay Sheffield United ka hor tegin.
Haddaba waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa shan arrimood oo sabab u noqday dhibaatada haysata kooxda Manchester City.
5. Dhiirigelin la’aan
Manchester City waxay jabisayy dhamaan rikoodhadii horyaalka Premier League labadii xili-ciyaareed ee tegay, waxaanay ku guuleysatay isku-geynta dhibcaha labadaas sannadood 198 dhibcood. Waxa kale oo ay ku guuleysteen Carabao Cup laba jeer iyo FA Cup oo ah koobka ugu faca weyn taariikhda kubadda cagta Ingiriiska.
Xili ciyaareedkanna, waxa la filayey in sidii labadaas sannadood ee hore ay sameeyeen ay mar kale ku celiyaan, laakiin guul-darradii kasoo gaadhay Manchester United, waxay iclaamisay in Pep Guardiola uu ku jiro dhibaato horyaalka oo aan kala-badh gaadhin uu quus ku istaago.
16-kii ciyaarood ee xili ciyaareedkan ay ciyaartay, Manchester City waxay lumisay 20 dhibcood, waxaanay taasi aad uga badan tahay dhibcii ay lumiyeen xili ciyaareedkii hore oo dhan. Waxa intaas dheer, in qaab ciyaareedka guud ee kooxda uu ka maqan yahay dhiirranantii, damacii iyo doonistii aan daalka lahayn ee xili ciyaareedyadii hore kasoo muuqan jiray daqiiqadda u horreysa illaa dhamaadka ciyaar kasta.
Niyad-xumada ciyaartoygu waxa kale oo ay sababtay in kubaddii ay kooxaha ka haysan jirtay City lala qaybsado oo ay waliba iska xakamayn kari weydo weerarrada lagu soo qaado. Waxa kale oo gacan ka geysatay aaladda VAR oo ay City marar badan ka cabatay, ciyaartoygeeduna aamineen in iyaga uu ka xagliyo.
4. Labada Xilva
Kabtanka Manchester City ee David Silva, waxay dadka qaar ku tilmaamaan inuu yahay mid ka mid ah xiddigihii ugu wanaagsanaa ee taariikhda kooxda soo maray. Dad kale ayaa iyaguna waxay heerkaas oo kale gaadhsiiyaan Sergio Aguero iyo Vincent Kompany, laakiin Silva waxa uu dheer yahay in tan iyo 2010 oo uu kusoo biiray uu ahaa tiir weyn oo farsameeyo kubadda kooxda, sidoo kalena qayb weyn ku lahaa natiijo kasta oo wanaagsan oo ay hesho.
Silva waxa uu hadda ku jiraa sannadkiisii ugu dambeeyey ee heshiiska uu kula jiro City, waxaanay kusoo beegantay xilli ay toban sannadood ugu buuxsameen Etihad Stadium, hase yeeshee da’diisa 33 jirka noqotay ayaa waxay u muuqataa in ay yaraysay mucjisooyinkii uu soo bandhigi jiray.
Manchester City oo ogsoonayd in Silva ay da’diisu weynaatay oo uu gaadhay xilligii uu bixin lahaa funaanadda kooxdaas, waxa beddelkiisa u diyaarsatay xiddiga reer Portugal ee Bernardo Silva.
Bernardo oo ay da’diisu tahay 25 jir, waxa sannadkii 2017 ay City kusoo qaadatay lacag dhan 43 milyan oo Gini, laakiin xili ciyaareedkii hore, kaliya ciyaaraha waaweyn ee gudaha oo kaliya muu dheelin, laakiin waxa uu sidoo kale ahaa halyeygii waddanka Portugal u qaaday Koobka UEFA Nations League, isla markaana Cristiano Ronaldo ku garaacay abaal-marinta xiddiga tartankaas. Hase yeeshee, tababare Pep Guardiola ayaa xili ciyaareedkan beddelay booska Bernardo Silva, waxaanu geeyey dhinaca midig ee weerarka, halkii uu khadka dhexe ee weerarka raacsan oo caadiyan uu ka ciyaaro uu tababaruhu istaajin lahaa. Tani waxay xaddiday fursadaha uu Riyad Mahrez helo maadaama booskiisii uu Bernardo Silva taagan yahay, waxaanay tani noqotay dhibaato weyn oo wiiqday awooddii kooxda, isla markaana yaraysay waqtiga ay heli lahaayeen ciyaaryahannada hal-abuurka leh sida Riyad Mahrez.
Arrintan waxay ka mid tahay dhibaatooyinka uu gacantiisa ku samaystay Pep Guardiola ee sababta u noqday bandhigga liita ee kooxda iyo guulihii laga filayey oo hooseeya.
Riix 2 iyo 3 si aad u wada akhrisato